सेतो बाकस….::Nepali News Portal from Nepal
रजिस्टेशन को आडमा एउटा नर्स स्टेशन, त्यसको छेउमा बेडहरु थिए । बेड माथि सेता तन्ना र त्यहि तन्ना माथि म । मान्छेहरु रोग लागेर भगवानलाई भेट्न जान्छन र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ डाक्टरलाई भेट्न जानुपर्छ । मर्नु अगाडि भेट्नु पर्ने मान्छे डाक्टर, नर्स अनि जानुपर्ने ठाउँ हस्पिटल ।
नर्स केटिले एउटा हरियो स्लाईनको पोको लिएर आई । कता दुखेछ भनेर सोधि । पेट देखाए । मलाई पेटभित्र कुनै ज्वालामुखि बिस्फोट हुन लागे झै भएको थियो ।
उसले कपडा माथि सार्न भनी , पेट देखाउन पनि निकै लाज लागेको थियो । निकै राम्रा नर्सका अगाडि कपडा माथि सारेर पेट देखाउन पनि समस्या भएको थियो ।पेट र छातिको पिडाले देखाउन मात्र होईन पेट काट्नै परे पनि हुन्छ भन्न तयार थिए । तै पनि कताकता लाज त हुने नै भयो ।सुन्दर तरुनी नर्सहरुको बीचमा ।
हातमा सुइले घोचेर स्लाइनको पानी नसाबाट भित्र पठाइदै थियो । बरु स्लाइनको ठाउमा विष घोलेर शरीर भित्र पठाइदिए क्या आनन्द हुन्थ्यो नि । सबै बेडमा स्लाइन र औषधी झुन्डाउने ह्याङ्गर थिए । त्यो हाङ्गरमा स्लाईन र औषधि झुन्डिएको थियो तर म भने दुखाईको ह्याङ्गरमा झुन्डिएको थिए । सबै बेडमा ओखती र अबश्यक सामाग्री पठाउन मिल्ने गरि सानो रोबट राखिएको थियो । नर्स स्टेसन बाट पठाएको सामान त्यहि बेडमा रोकिन्थ्यो । क्या गजबको बिकास । यहा त रोबट पनि भरिया जस्तो ।
नर्स केटिहरु आएर सोधेका सोधै थिए । के भएको छ । मेरो जवाफ त त्यहि थियो (फे आफ्फायो) पेट दुख्यो । यो भाग दुख्यो । त्यो भाग दुख्यो । पटक पटक त्यहि मात्र प्रश्न ? कुनै नदुख्ने सुइले उनिदिए हुन्थ्यो नि । एउटा सुइ घोचेर मारिदिए हुन्थ्यो झै लाग्थ्यो ।यो प्रश्न सोध्नु भन्दा सिधै नदुख्ने सुई हानिदेउ मैले भने ।
ल एक्सरे गर्न जाउ भुन्टे केटा आयो । खै त्यो एक्सरेले मेरो दुखाई खिच्न कसरी सक्ला र ? म दुखेको दुखाई खिच्ने एक्सरे त म नै हु । तै पनि पेट र छातिको दुखाई को प्रमाण देखाउन चाहन्थ्यो एक्सरे । त्यो चित्र लिएर डाक्टरले भन्ने छ हेर त तेरो पेटमा समस्या छ । तेरो आन्द्रामा दाग छ । तेरो कलेजो खत्तम भएको छ , यस्तै यस्तै ।
फेरि डाक्टरले मुटुको चाल जाच्ने डल्लाहरु पेटको विभिन्न भागमा टांसिदियो र मेरो मुटुको चाल हेरिरह्यो । म भने एकोहोरो सास फेरिरहे ।
कति खान्थिस रक्सि ? दिनको तीन बोत्तल । भएको कुरा भन्न केको डर ? मैले खुरुखुरु भनिदिए ।
कहिले देखि खाना थालेको? दुई बर्ष देखि । डाक्टर केटा ले प्रश्नलाइ म भने भने ऐया र आत्था गरिगरि उत्तर दिने प्रयास गरिरहेको थिए ।
अघिपछि सुकिला र राम्रा केटि देख्दा बेमत्ता हुने यो मन आज खुम्चिएको मरिज जस्तो भएको छ । यौवनको राग यसरी मरिरहेछ वा म आफैले मारिरहेको छु भेउ पाउन सकेको थिइन ।
हिजो सम्म केटि देख्दा तिब्र यौवनको काडाहरु जुरुक्क उठ्ने मेरो मात्तिएको मनलाई पेट दुखाईले दाम्लोमा बाधिएको वर जस्तो बनाएको छ । छाति दुखाईको ह्याङ्गरले झुन्डिएर घाँटी पासो लगाईदिए झै भएको थिए म ।
मत त्यि राम्रा र यौवनका नर्सहरुलाइ देख्दा भगवानलाई देखेजस्तो भएको थिए । मान्छेको सोच र अबस्थामा भर पर्दाे रहेछ यौवन र चाहना भन्ने कुरा पनि । आज किन मौन छु ? आज किन पुरै सुध्रिएको छ यो मन ? प्रश्नै प्रश्नको पर्खाल लागेको छ अाँखाअघि ।
यो दुखाई भन्ने चिज पनि कति चुलबुले छ । मानौ उ हरेक क्षणमा एक ठाउबाट अर्काे ठाउमा बसाई सारिरहन्छ । टाउकोमा दुखिरहेको छ । उ फेरि पेटमा सरेको छ । मानौ दुखाइ पहाडबाट तराइ बसाइ सर्ने मान्छे जस्तो बनेको छ । मलाई अझै सास फेर्न कठिन भएको छ ।
साथमा भएको साथि पनि मलाई हरेर बेचइन छ । पेटका लाम्टाहरु दुखेर खटि नसक्ने भएको छ । त्यहि बेला आमा बा र गाउँको याद आउदा त भक्कानिएको छातिमा उनिहरु बसे झै लाग्थ्यो । आसु को झरि त विदा भईसकेको थियो ।आखिर रोएर हुने पनि त केही थिएन । रुँदा रुँदा अाँखाबाट अाँसु पनि बिदा भै सकेको थियो । जब शरिरले साथ छाडेपछि आफुले पनि अरुको साथ छोेड्नै पर्ने । अब त यो संसारिक दुनिया बाट छिटो विदा लिन पाए पनि हुन्थ्यो झै लाग्थ्यो ।
म अब बाच्दिन भन्ने थाहा पाइसकेको थिए । मन निकै कमजोर भएको थियो ।
बाबाको काख नपाउदा ननिदाउने छोरिलाई काखमा राखेर सुत्न मन लागेको छ । एक पटक त्यि हुर्केका गाउघर,पाखा पखेरामा दौडिन मन लागेको छ । एक पटक नेपाल जान मन लागेको छ । आमालाई भेट्न मन लागेको छ ।
क्रमश .. कोरिया बारे लेखिएको सज्जनको उपन्यास सेतो बाकस बाट ।
कविता : देश लकडाउनमा छ
कविता : सिस्टर नभन्नु ल !
गायिका कनिकाको चौथो परीक्षण पनि पोजेटिभ, गरिन भावुक पोस्ट !
नियात्रा: हाचिको भेट्न सिबुया